डोजरले सडक खनेर श्रमिकका नाममा बिलः एकवर्षे बालकलाई एक महीना काम लगाएर रु.१७ हजार भुक्तानी ! - साइपाल खबर
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१९ साइपाल खबरLeaveaComment on डोजरले सडक खनेर श्रमिकका नाममा बिलः एकवर्षे बालकलाई एक महीना काम लगाएर रु.१७ हजार भुक्तानी !
यो मामिलाका जानकार एक व्यवसायी भन्छन्, “यस्तो नक्कली कामबाट जनप्रतिनिधि र डोजर संचालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ । एकातिर ठूलो नाफा, अर्कोतिर उपभोक्ता समितिले काम गरेको देखिने हुनाले व्यवसायीले कारोबार र आयमा कर समेत तिर्नुपर्दैन भने जनप्रतिनिधिले विकास गरेको देखाएर कमिशन खान पाउँछन् ।”
लकडाउनमा ११०५ जनाले गरे आत्महत्या
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:२४ साइपाल खबर